पुरानो रेडियो र टिभि बहुमुल्य भन्दै किन खोजिदै छ? पुरा जान्नु होस। - Solududhkunda Online
पुरानो रेडियो र टिभि बहुमुल्य भन्दै किन खोजिदै छ? पुरा जान्नु होस।
- 2020 November5मा प्रकाशित
काठमाडौं । पुरानो काठका आवरण भएको रेडियो वा टेलिभिजनमा रेड मर्करी पाइन्छ भन्ने भारत हुँदै छिरेको हल्लापछि अहिले काठमाडौं, विराटनगरसहित देशका विभिन्न भागमा यस्ता रेडियो, टिभी खोज्नेका संख्या बढेको छ ।
विराटनगरका एक व्यवसायीका अनुसार करिब २ महिनायता भारततिरबाट आएका केही व्यक्तिले घर–घरमा पुगेर पुराना रेडियो, टिभी महँगो दाममा किन्ने भन्दै हिँडेका छन् । कम्तिमा ५ लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म मूल्य पाइने भनिएपछि केही व्यक्तिहरू यसको खोजीमा गाउँघरतिरसम्म पसेका छन् भने केहीले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनसमेत हालेका छन् ।
गत सेप्टेम्बर महिनादेखि भारतमा यसबारे भ्रामक सूचना फैलिएको थियो । हिन्दी भाषामा सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा यसबारे विभिन्न सामग्री प्रकाशित गर्दै यसको मुल्य लाखौं पर्ने दाबी गरिएको थियो । भारतको फ्याक्टली नामक तथ्य जाँच गर्ने वेबसाइटले उक्त अफवाहको तथ्य जाँच गरेको छ ।
“रेड मर्करी नामक कुनै रसायन वा पदार्थ अस्तित्वमा छैन,” काठमाडौ इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्ससँग आबद्ध वैज्ञानिक बसन्त गिरीले बताए । “त्यो रातो रंगको तरल पदार्थ रेड डाई वा मर्करीको कुनै कम्पाउण्ड हुनसक्छ । तर यसको कुनै विशेष मुल्य छैन । बरु मर्करी मिसिएको पदार्थ विषालु हुनसक्छ ।” उनले भने–“पुराना रेडियो वा टिभी जस्ता विद्युतीय सामानमा लिड (शिशा) जस्ता भारी सामग्री हुनसक्छन् । त्यस्ता विषालु सामग्रीलाई रिसाइकल गर्न सकिन्छ । तर ती बहुमुल्य होइनन् ।”
साभारः साउथ एसिया चेक